Midori Browser: Waa biraawsar biraawsar furan, furan, fudud, deg deg ah oo aamin ah | Laga soo bilaabo Linux
Laga bilaabo bisha Febraayo waxaan ku bilaabi doonnaa codsi yar oo aan ka faalloonay waqtigiisii ​​Blog-ga. Waxaa loo yaqaan "Midori Browser", iyo asal ahaan waa beddel iyo waxtar Web browser taasi waxay ku dhalatay ujeedada ahaansho iftiin, dhakhso leh, ammaan ah, softiweer bilaash ah iyo ilo furan, sida ay sheegeen horumariyeyaasheeda.
"Midori Browser" waa hadda, badeecad bilaash ah oo furan oo ay soo saartay hay'ad la yiraahdo «Kooxda Astian» taas oo iyaduna iska leh a Aasaaska isku magac ah (Astaan), oo ah koox ururo ah oo u heellan horumarinta softiweer iyo teknolojiyad bilaash ah iyo geynta adeegyo dhiirrigeliya oo taageera guud ahaan asturnaanta iyo xakamaynta macluumaadka.
Sidekick: Shabakad internet si aad u hesho khibrad shaqo oo khadka tooska ah ka wanaagsan.
Kahor intaanan toos ula boodin "Midori Browser" Way fiicantahay in lagu xasuusiyo in boggayaga internetka aan ku hayno qoraallo badan oo daalacayaal kala duwan ah, oo aan kugula talinayno raadinta iyo akhrinta haddii loo baahdo. Tusaale ahaan, kii ugu dambeeyay ee la faalloodo wuxuu ahaa Sidekick, oo aan ku sifeyno sida soo socota:
"Sidekick waa nidaam kacsan oo cusub oo shaqeynaya kuna saleysan biraawsarka Chromium. Loogu talagalay in ay noqoto waayo-aragnimada ugu dambeysa ee shaqada ee khadka tooska ah, waxay u keentaa kooxdaada iyo aalad kasta oo websaydh ah oo aad u wada isticmaasho dhammaantood hal interface." Sidekick: Shabakad internet si aad u hesho khibrad shaqo oo khadka tooska ah ka wanaagsan
Sidekick: Shabakad internet si aad u hesho khibrad shaqo oo khadka tooska ah ka wanaagsan
Intaas waxaa sii dheer, waxay si toos ah ugu qiimeyn karaan qaar badan oo iyaga ka mid ah degellada rasmiga ah, adoo adeegsanaya liistada soo socota:
0.1 Bog furayaasha shabakadda
1 Midori Browser: Browser Shabakad Kale
1.1 Waa maxay Midori Browser?
1.2 Noocyada iyo waxqabadka
1.3 Horumarinta iyo adeegyada bilaashka ah iyo kuwa furan ee la xiriira Midori
Bog furayaasha shabakadda
Yey bilaash ah
SRWare Bir Browser
Kaxariiqa loo yaqaan 'Chromium'
Midori Browser: Browser Shabakad Kale
Waa maxay Midori Browser?
Sida laga soo xigtay horumariyayaasheeda degel rasmi ah, waxaa lagu tilmaamay sida soo socota:
"Midori Browser waa biraawsar ku dhashay ujeeddadiisu inay ahaato mid fudud, dhakhso leh, ammaan ah, softiweer bilaash ah & il furan. Taasi waxay ixtiraameysaa asturnaanta isticmaaleyaasha adigoon uruurinaynin macluumaadka ama iibin xayeysiinta qallafsan, waxaad had iyo jeer yeelan doontaa xakamaynta xogtaada, qarsoodi, qarsoodi ah".
Waqtigan xaadirka ah bogga rasmiga ah ee ay ku socoto nooca xasilloon 1.1.4 ee Linux rakibayaasha gudaha ".Deb qaab" y «Qaabka AppImage». Si kastaba ha noqotee, waxaa lagu rakibi karaa mid kasta GNU / Linux Distros si toos ah uga socota bakhaaradaada amarka fudud ee fudud:
Iyo haddii la soo dejiyo, sida soo socota:
Xaaladdayda gaarka ah, maxaan u isticmaalaa MX Linux, nooca la heli karo lana rakibay ayaa ah nambarka nooca 7.0.2.
Noocyada iyo waxqabadka
Inta u dhaxaysa sifooyinka ugu muhiimsan iyo waxqabadka waxaan dhihi karnaa:
Madal badan: Waxay awood u leedahay inay ku shaqeyso qalab kasta oo desktop ah iyo casriga casriga ah ee Android, maadaama ay la timid rakibayaasha Linux, Windows, MacOS iyo Android.
Asturnaanta iyo Asturnaanta: Wuxuu ixtiraamayaa asturnaanta adeegsadayaasha, tan iyo horumariyeyaasheeda «(Kooxda Astaan)» Waxay xaqiijinayaan inaysan ka ganacsan doonin macluumaadkooda, sidoo kale waxay ballanqaadayaan inaysan iibinaynin xayeysiis xayeysiis ah ama isticmaaleyaasha astaamaha. Intaas waxaa sii dheer, Midori Browser wuxuu adeegsadaa mashiinka raadinta DuckDuckGO asal ahaan asturnaan badan.
Iswaafajinta iyo Kaydinta Daruuraha: Waxay leedahay is dhexgal adeeg ay leeyihiin horuumiyayaasheeda si loo gaaro iswaafajinta dhammaan macluumaadka isticmaalaha, taas oo ah, macluumaadka, taariikhda, calaamadaha calaamadaha, furaha sirta ah iyo waxyaabo kale oo badan, iyadoo la adeegsanayo qarsoodi illaa dhammaad.
Bulsho Weyn: Waqtigan xaadirka ah waxay leedahay beel weyn oo, sida mashaariicda kale ee SL / CA, diyaar u ah inay na caawiyaan oo si firfircoon uga qaybqaataan horumarinta mashruuca, isdhexgalka astaamaha cusub, hagaajinta dhibaatooyinka iyo waxyaabo kaloo badan.
Horumarinta iyo adeegyada bilaashka ah iyo kuwa furan ee la xiriira Midori
Hada, horumariyeyaasha Midori bixiyaan xiiso leh adeegga turjumaadda khadka tooska ah (turjumaan), ilo furan, oo tarjumaad otomaatig ah u leh luqado kala duwan, oo aan ku raaxeysan karno adigoo gujinaya waxyaabaha soo socda isku xirka.
Iyo ugu dhakhsaha badan, waxay bilaabi doonaan a Nidaamka hawlgalka, taas oo aan qiyaaseyno inay noqon doonto mid bilaash ah oo furan, kuna saleysan GNU / Linuxloo yaqaan Astiyaan.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Midori Browser», bedel ah oo waxtar leh Web browser taasi waxay ku dhalatay ujeedada ahaansho iftiin, dhakhso leh, ammaan ah, software bilaash ah oo furan; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, guud ahaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Midori Browser: Waa biraawsar biraawsar furan, furan, fudud, deg deg ah oo aamin ah
Waan isku dayay waana run inay fududahay laakiin ma aanan jecleyn isku xirkeeda, inta badan laxiriirta tabsyada iyo habka loo maareynayo, sidoo kale kuma arko si deg deg ah shabakada, laakiin hey taasi waa fikirkeyga, qofkastoo jecel markaa inuu u adeegsado dhib la'aan, salaan
Salaan, Octavio! Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga oo noo dhaaf khibradaada gaarka ah ee Midori.
Janaayo 2021: Wanaagga, xumaanta iyo xiisaha Software-ka Bilaashka ah